Kanada oo mar kale la soo taagay Eedeysane Somali loo haysto Afduubkii Suxufiyiin horey loogu afduubtay Somalia – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Kanada oo mar kale la soo taagay Eedeysane Somali loo haysto Afduubkii Suxufiyiin horey loogu afduubtay Somalia
Eedeysane Ali Omar Adeer oo 37 jir ayaa mar kale Video ahaan uga soo muuqday Maxkamad ku taalla caasimadda dalka Kanada ee Ottawa, isagoo ku eedeysan afduubkii Saxafiyad u dhalatay dalka Kanada oo lagu magacaabo Amanda Lindhout.
Eedeysanaha oo 37 jir ah ayaa ka soo muuqday Muuqaalka Video-ga, isagoo xiran labiska maxaabiista, isla markaana gacmaha ka jeebedeysan.
Garyaqaankiisa, Samiir Aadam ayaa codsaday in la siiyo Tiddobaad kale, si ay isaga iyo Eedeysanaha uga xaajoodaan caddaymaha Kiiskiisa oo ay Boliska hayaan.
Garyaqaanka waxa kaloo uu sheegay inuu doonayo in Turjumaan loo qabto Eedeysanaha oo aan ku hadli karin Luqadda Englishka.
Eedeysane Ali Omar Adeer ayaa la filayaa in Maxkamad mar kale la soo taago bishan June 26-da, waxaana haatan uu ku jiraa gacanta Boliska, iyadoo lagu hayo Xarunta dadka lagu hayo ee The Ottawa-Carleton Detention Centre.
Eedeysanaha waxaa bishan June 11-dii lagu xiray Graoonka diyaaradaha ee caasimadda dalka Kanada ee Ottawa, iyadoo lala xiriirinayo Afduubkii Saxafiyad u dhalatay dalalka Kanada, Amanda Lindhout. iyo Suxufi u dhashay dalka Australia oo lagu magacaabo Nigel Brennan.
Suxufiyiinta waxa bishii August ee sannadkii 2008-dii laga afduubtay duleedka magaalladda Muqdisho, waxayna Afduubayaasha si idaayeen 15 bilood kadib, markii la bixiyey lacag madax furasho oo la sheegay inay dhamayd 600,000 oo Dollars.
Waxqabadka Dowladda ee Usbuucii la soo dhaafay 20 June 2015